Modely am-polony voasambotra noho izy ireo nitanjaka niboridana tany Dubai
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Emirà Arabo Mitambatra sy Vaovao momba ny fizahan-tany » Modely am-polony voasambotra noho izy ireo nitanjaka niboridana tany Dubai
Miatrika 6 volana any am-ponja any Dubai ny vehivavy taorian'ny fotoam-pivarotan-tsary niboridana tao Dubai Marina
Ny fotoam-pivarotana sary mitanjaka any Dubai dia mitarika amin'ny fisamborana
Mampitandrina ny Polisy Dubai amin'ny 'fihetsika tsy ekena'
Mety higadra enim-bolana an-tranomaizina sy onitra 5,000 XNUMX dirham no voasambotra
Araka ny tatitra nataon'ny haino aman-jery Dubai, tovovavy am-polony mahery no voasambotra noho izy ireo niboridana tany ivelany tao amin'ny faritra avo any Dubai Marina.
Omaly, nanjary nalaza tao amin'ny media sosialy ny lahatsarin'ireto tovovavy ireto, niaraka tamin'ny mponina iray tao a Dubai tilikambo fandraisam-peo ny vondrona avy amin'ny trano hafa eo amin'ny manodidina.
Araka ny tatitra, ireo maodely nandray anjara tamin'ny fakana sary dia avy tamin'ny USSR teo aloha, anisan'izany i Moldova, Ukraine ary Belarus. Rosiana iray, izay nanatrika teo rehefa nalaina ilay horonantsary ary, izay voalaza fa nandamina ny fitifirana, dia isan'ireo voasambotra ihany koa.
Niditra an-tsehatra ny departemantan'ny polisy teo an-toerana, taorian'ny nielezan'ny horonantsary ary niely tamin'ny Internet.
Ireo voarohirohy dia voampanga ho nanao fanararaotana (Andininy faha-361 amin'ny fehezan-dalàna momba ny heloka bevava UAE), izay mety higadra enim-bolana an-tranomaizina sy onitra 5,000 1,361 dirham (XNUMX XNUMX $). Ho an'ireo mpikarakara ny sarin-tsary dia mety ho mafimafy kokoa aza ny sazy, miaraka am-ponja azo antoka.
"Ny polisy Dubai dia mampitandrina ny amin'ny fitondran-tena tsy ekena izay tsy maneho ny soatoavina sy ny etika ao amin'ny fiarahamonina Emirati," hoy ny fanambarana avy amin'ny Departemantan'ny polisy ao Dubai.
Ny Emirà Arabo Mitambatra sy ny Emira Arabo any Dubai dia manana rafitra ara-dalàna henjana mifototra amin'ny Lalàn'i Sharia.